Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu)
Ọnụ ụzọ ọsọ ngwa ngwa a na-ejikarị eme ihe maka ebe ndị na-ebudata ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Ejiri ya na ụzọ awara awara, a na-emeghe ọnụ ụzọ ndị a na-emeghe ihu na ebe ndị ụlọ na-ebelata. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya. Usoro ntinye aka na USB na-enye nwayọ na-aga n'ihu...
The transperent crystal acrylic iko elu ọsọ ọnụ ụzọ
Maka ihu igwe kachasị mma na-echekwa oghere ọnụ ụzọ nke nwere ngalaba nwere njikọ nke na-ejikọta ihe dị elu na-ekpuchi akụkụ nke ogologo nke panel ahụ. enwere ike ịmeghe ọnụ ụzọ ọhụụ na mpaghara ndị nwere ọnụ ọgụgụ isi. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya. Usoro ntinye aka na USB na-enye...
Ọnụ ụzọ dị elu nke na-agba ọsọ dị elu
Ugboro ọsọ ngwa oru counterbalance gụnyere nke iyi esetịpụ na ígwè nchara na-akwa trasile helical ọnya nchara. Emeela ya ọkụ maka arụmọrụ ka mma maka gburugburu 50,000 cycles. A na-eji ọnụ ụzọ dị elu karịa ebe a na-ebugharị ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma jiri aka na-agagharị, a na-emeghe ọnụ ụzọ a na-emeghe...
Nnukwu ọnụ ụzọ dị elu na nnukwu ígwè
Nnukwu ọnụ ụzọ dị elu na nnukwu ígwè Kedu ihe bụ njedebe nke ọnụ ụzọ dị elu? 1) Ogwe mmiri Alloy Alloy na ikiri windo maka akụrụngwa
Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Pvc Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Ụlọ Elu Ọnụ Ụlọ Ọsọ Elu Ụlọ Elu Ọnụ Ahịa Dị Elu Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu na Ogo Ogologo Ụlọ Nzuzo Elu Ọnụ Ụzọ Ámá Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Obere Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ